भूकम्पले क्षतविक्षत पारेको रंगशाला कहिले पुनर्निर्माण होला ? १३औँ साग प्रभावित हुनसक्छ » Etajakhabar
बिहिबार, मंसिर २८, २०७४	| Thursday, Dec 14, 2017
भूकम्पले क्षतविक्षत पारेको रंगशाला कहिले पुनर्निर्माण होला ? १३औँ साग प्रभावित हुनसक्छ
भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन् । पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर हुन नसक्दा सन् २०१९ मा नेपालमा आयोजना हुने १३औँ साग प्रभावित हुने देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै सागअघि नै पुनर्निर्माण गरिसक्ने जनाएको थियो । अहिले पुनर्निर्माणका लागि रंगशालाको संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ । टेन्डरपछि निर्माणका लागि प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्ने भएकाले समयमै काम पूरा गर्न कठिन हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले बताए । प्रकाश कँडेलले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
राखेप परिसर र रंगशालाका लागि ५१ करोड राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को परिसरमा बन्न लागेको कर्मचारी भवन र खेलाडी अस्पताल निर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारी भवन र खेलाडी अस्पतालको निर्माण पनि सागअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म टेन्डर प्रक्रिया बाँकी नै छ ।
समयमै साग चुनौती रंगशाला निर्माण समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण सागलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त हुनेमा खेलकुदसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले आशंका जनाएका छन् । काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरलाई विकेन्द्रित गरी साग आयोजना गरिने बताइएको छ । तर, पोखरा रंगशालाका लागि हालै मात्र ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ । सो रंगशाला १० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
रंगशालाको क्षमतामा कमी यसअघि रंगाशालाको क्षमता १८ हजार दर्शक अट्ने थियो । पुनर्निर्माणसँगै दुईदेखि तीन हजार संख्या घट्नेछ । साधारण दर्शक बस्ने प्याराफिटमा कुर्सी राखिएको र छतको भागको पिलरले केही ठाउँ लिने भएपछि यसअघिको क्षमतामा केही कमी आउने इन्जिनियर विश्वमित्र सञ्जेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ०८, २०७४ समय: १०:३३:५९
एभरेष्ट प्रिमियम लिग क्रिकेटका लागि टोली छनोट
साफ च्यापियनसिप फुटबल बंगलादेशमा हुने
नेपालद्वारा हङकङ चार विकेटले पराजित , नेपालको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो
साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा स्याङ्जाबाट मात्रै सात खेलाडी छानिए
नेपाल यूएईसँग सात विकेटले पराजित
आफ्नै देशमा लियोनेल मेसीको मुर्ति फेरि तोडफोड : हेर्दा हेर्दै ढले मेसी, फ्यान रिसले आक्रोशित
नेपाली मुलका भारतीय फुटबल खेलाडी सुनीलले गरे हिन्दु परम्परा अनुसार विबाह, नेपाली ढाका टोपीमा सजिएर घोडा चढि गए दुलही लिन(भिडियो)
पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल बिना नै मैदानमा उत्रेको नेपालद्धारा केन्या ६ विकेटले पराजित
आहा रारा फुटबल प्रतियोगिता माघ ९ देखि
जहाँ भए चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै महिला पराजित
उत्तर कोरिया वार्तामा आए राष्ट्रसंघले सघाउने
३७ वटा हात्तीको प्रयोग गरेर देशभर बाघ गणना, यस्तो छ तथ्यांक
कलेजको क्यान्टिनमा सिलिण्डर ग्यास पड्कँदा आगलागी, भयो ठूलो क्षती
यस्तो छ कांग्रेस हार्नुको भित्री रहस्य, सानो खेल पक्कै छैन
डिर्भोसपछि पनि यसरी मुस्कुराउन खोज्दैछिन् रिमा बिश्वकर्मा
नेपाल आइडलका विजयीहरू बुद्ध लामा, निशान भट्टराई र प्रताप दास अमेरिका जाँदै
रबि लामिछानेकाे आलाेचना गरेर आफु चर्चित हुने दिवास्वप्ना नदेखेकै राम्राे